PRESSE EDITION ET DIFFUSION - Les livres sonores
Accueil Les livres sonores
I Vonindrano sy i Zavonandro
«I Vonindrano sy i Zavonandro» no boky voalohany navoakan’i Arikaomisa Randria tao amin’ny éditions jeunes malgaches tamin’ny 2017. Izy dia mpanoratra sy mpitantara angano malaza ary dia tena mahay manoratra tokoa. Efa navadika ho boky braille ihany koa ho an’ireo jamba io bokiny io tamin’ny heritaona. Raha vao nantsoina izy dia nanaiky namadika ny boky ho feo tao anatin’ny fotoana fohy mba hamporisihina ny ankizy rehetra ho tia mamaky boky amin’izao fotoana tsy hianarana izao.
Ny volon?i Cora
I « Ny volon’i Cora » dia boky navoakan’ny trano famoaham-boky brezilianina Pallas tamin’ny taona 2013 tamin’ny teny Portugais (O Cabelo de Cora). Nadika tamin’ny teny frantsay aloha ny lahatsoratra (Les cheveux de Cora) vao nadikan’i Veloniaina Rabakoly tamin’ny teny malagasy tamin’ny taona 2014. 6 taona aty aoriana dia mbola amidy foana io boky io ary havadika ho boky braille ho an’ireo jamba amin’ity taona ity. Tamin’ny 2016 no navadika ho feo ity boky ity mba hamporisihina ny ankizy rehetra ho tia mamaky boky.
I « Ny hazo, ny rano ary ny rivotra » no boky faharoa navoakan’i Jeanne Ralimahenintsoa na Tatie Jeanne ao amin’ny Editions Jeunes Malgaches tamin’ny 2013. 7 taona aty aoriana dia mbola amidy foana io boky io ary efa navadika ho boky braille ihany koa ho an’ireo jamba. Tamin’ny 2016 no navadika ho feo ity boky ity mba hamporisihina ny ankizy rehetra ho tia mamaky boky.
I « Maria Vakansy any Alaotra » no boky voalohany navoakan’ny éditions jeunes malgaches tamin’ny 2004. Rakotoanosy Marie Michèle no nanoratra azy. 16 taona aty aoriana dia mbola amidy foana io boky io ary efa navadika ho boky braille ihany koa ho an’ireo jamba. Tamin’ny 2016 no navadika ho feo ity boky ity mba hamporisihina ny ankizy rehetra ho tia mamaky boky.